Mutauro - Wikipedia
Mutauro (ku Chingezi: language) kana rurimi hunhu wevanhu unoita vakwanise kutaurirana, uye mutauro unorevawo muenzaniso wezvinoitika. Ruzivo rwakadzama nezvemitauro runonzi ururimi (linguistics). Nyanzvi dzemitauro dzinonzi vanagodobori.
Mitauro iri kushanduka nekufamba kuri kuita nguva, nemunhoroondo yekushanduka inogona kuvakiridzwa nekuenzaniso nemitauro yemazuva ano. Mitauro inotaurwa nevanhu vakabva kumadzitateguru ane madzinza akafanana vanotaura mhuri ye mitauro yakafanana.
Marudzi anonyanyotaurwa anosanganisira mitauro yeChiindo-Yuropu (neChirungu neChispanishi), mitauro yeChisino-Taibheti (neChimandarini, Chikandonisi), mitauro yeChiAfurika-Ezhiya (neChiarabhu, Chiamhariki, Chisomari, neChihebheru), nemitauro yeChiBantu (neChiswahiri, Chizuru, Chishona).
1 Tsananguro ye mutauro
Tsananguro ye mutauro[chinja | edit source]
Mashoko aripazasi ndiwo anoshandiswa kutsanangura zvemaumbirwo omutauro.
varamai, nzvanyira consonant
Umbamutuaro[chinja | edit source]
Constructed language kana Conlang mutauro une ruambainzwi (phonology), maumbirwo, uye mazwi, pachinzvimbo chekukudziridza zvakasikwa, zvine hungwaru zvakaumbwa kana kugadzirwa sebasa rekunyepedzera. Mitauro yakaumbwa inogona zvakare kutaurwa semitauro yekunyepedzera, mitauro yakarongwa kana mitauro yakaumbwa uye mune dzimwe nguva, mitauro yekunyepedzera.
VaGanda vanoti olulimi (language) kureva rurimi. VaKongo vanoti ndinga (language) kureva mutauro.
VaBukusu vanoti chiindomo (languages, dialects) kureva mutauro kana muyambonyina.
VaNgala vanoti lokota (language) kureva mutauro. VaShambala vanoti mbuli (n. language).
VaGanda vanoti bigambo (language) kureva mutauro. VaIkizu vanoti ikigambu (n. speech; language).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutauro&oldid=90282"
This page was last edited on 4 Zvita 2021, at 02:18.